University of East Anglia (UEA) - Education in United Kingdom
guta : Norwich
inotangwa : 1963
Musakanganwa kuti kurukura University of East Anglia
Kunyoresa pana University of East Anglia
University of East Anglia anopa UK wacho “yakanakisisa kembasi ruzivo”, sezvo akavhotera muna Times yepamusoro Student Experience Survey 2016).
UEA vadzidzi vadzidzi vanofara, pamwe yunivhesiti nguva yandaipuwa pamusoro 5 muna National Student Survey (2005-2016). Chimwe zvikonzero izvi UEA raMwari nakisisa nzvimbo – uchaita kunakirwa yakaisvonaka Parkland kembasi mu 3rd guta zvikuru mudzidzi muUK wacho (The Telegraph 2015).
Yunivhesiti inopa aakatipa zvivako, kusanganisira rokumusoro-yandaipuwa mitambo Zvivako zviri UK wepayunivhesiti upi (The Complete University Guide) uye akanga yandaipuwa nhamba 1 nokuti makirabhu uye nzanga kubudikidza Whatuni Student Choice Awards 2014.
UEA ane achitungamirira zvedzidzo mukurumbira pasi pose. Ndicho pamusoro 1% yunivhesiti nyika-yandaipuwa (Times World University Rankings 2015-16) uye nhamba 14 muUK (University Complete Guide 2017).
Art, Media uye American Studies
Interdisciplinary Institute nokuti Humanities
Literature, Drama uye Creative Writing
zvematongerwo enyika, mafungiro, Language uye Communication Studies
Mushonga uye Health Sciences
Centre nokuti Interprofessional Practice
Achienderera mberi Professional Development
Dzidzo uye Woupenyu Hwose Learning
The yunivhesiti vakapemberera rayo mashanu rokuberekwa mu 2013. Tiine yakatsarukanainokosha girini nzvimbo, nevamwe akitekicha uye kuzvipira pakupa munhu ruzivo unhu mudzidzi, tava akaramba achikura kubva inception yedu 1960.
Mushure kuwana vanoenda-mberi kuvaka 1960, iye Earlham gorofu kosi akazosarudzwa sezvo nzvimbo yechigarire pazvivako uye basa rakatanga muna 1961.The yunivhesiti pakutanga inobva munyika ano University Village – pamwe kudzidzisa nzvimbo inenge 1200 vadzidzi – uye vakabvuma ayo’ Boka chokutanga 87 vadzidzi 1963. UEA akagamuchira yaro yokutanga Vice-chanzera, Frank Thistlethwaite panguva ino.
Denys Lasdun akagadzira chinoumba zvivako yeYunivhesiti, kusanganisira unoshamisa Ziggurats. Zvirongwa zvake zvaiva nokuda kembasi yunivhesiti zvose unogona vanoda zvose panzvimbo imwe. Achienderera mberi sezvo akitekiti mu 1968, Bernard Feilden akawedzera kukura nzvimbo pamwe 'Square', huru nechepakati magariro nzvimbo iri kembasi. Zvivako yokutanga zvachose akasvinudzwa kunonoka 1966.
UEA Broad uye Sainsbury Art muunganidzwa
1973 akaona mavambo basa riri picturesque nyanza pakatarisana Ziggurats, sevatsigiri UEA Broad, uye kuvaka Union House (uye nawo LCR uye Union Pub). Izvi gore iroro Sir Robert uye Lady Lisa Sainsbury vakapa yakakura muunganidzwa yavo Ndimi nyika University, uye saka basa rakatanga musi Sainsbury Centre, iyo akazarura mikova aro kuruzhinji mu 1978. Pepanhau mudzidzi Concrete yakavambwa panguva ino, kuti kuzodzosera kufamba muna 1992 ane kuitika makopi 4,500 makopi.
Nevamwe dzokudzidzisa uye greek ethos
UEA mafungiro zvedzidzo kwave nevamwe kubva pashoko kuenda. With yaro Mashoko pamusoro 'kuita zvakasiyana’ uye kufunga interdisciplinarity kuyambuka nyaya, UEA raramba kuva muchikoro dzaungagona yose zvayo budiriro. Recently paakavapa nhamba imwe nzvimbo muna Times yepamusoro Student Experience ongororo, yunivhesiti anoramba kuvaka mukurumbira wayo sechinhu vomuzana kirasi dzidzo Provider.
Unoda kurukura University of East Anglia ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
University of East Anglia pamusoro Map
Photos: University of East Anglia pamutemo Facebook
University of East Anglia wongororo
Join kukurukura pamusoro University of East Anglia.